2005 – Year – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Ghost Whisperer (2005) Season 1 Complete Unicode ငယ်တုန်းက DVD စက်တွေနဲ့ ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ Ghost Whisperer လေးကို Channel M-SUB ကနေပြန်ပီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ တော်တော်များများသိကျတဲ့အတိုင်း မင်းသမီးက သေဆုံးပီးဖြစ်တဲ့သူတွေကို မြင်ရပီး သူ့တို့ရဲ့ နောက်ဆုံး ဆန္ဒ တွေကိုဖြည့်စီးပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ ? သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ကျန်ရစ်သူတွေကို ဘယ်လို Message တွေပေးချင်ကျတာလဲ ? ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုကကော သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအပေါ် ဘာတွေပြောချင်ကျလဲ ဘယ်လိုခံစားချက်တွေရှိလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ မကြည့်ဖူးသူတွေကော ကြည့်ဖူးပီး Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက်ပါ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Lucas Wang ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ငယ္တုန္းက DVD စက္ေတြနဲ႔ ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ Ghost Whisperer ေလးကို Channel M-SUB ကေနျပန္ပီးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲေလးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိက်တဲ့အတိုင္း မင္းသမီးက ေသဆုံးပီးျဖစ္တဲ့သူေတြကို ျမင္ရပီး သူ႔တို႔ရဲ႕ ...